यसरी हुँदैछ भारतको पहिलो मेटाभर्स विवाह, उपहार पनि दिन सकिने !
२०७८ माघ ६ बिहीबार
काठमाडौँ । मेटाभर्स युग सुरु हुँदैछ । भारतमा पनि पहिलो मेटाभर्स विवाह अर्को महिना हुँदैछ, जसमा जोडीले मेटाभर्समा रिसेप्शन गर्ने छन् । ब्लकचेन, एआर र भर्चुअल रियालिटीमा आधारित यो प्रविधि अहिले लोकप्रिय हुँदै गइरहेको छ ।
भारतमा यस विवाहको खास चर्चा भइरहेको छ । विवाह भन्दा तपाईको दिमागमा के आउँछ ? घोडामा बसेको दुलहा, संगीत र फूलहरूले सजाइएको मंडप । यद्यपि, केही समयपछि यो विगतको कुरा हुनेछ, किनकि अब नयाँ पुस्ताले विवाह पनि भर्चुअल गर्न सक्ने छन् ।
तमिलनाडुका एक जोडीले मेटाभर्समा विवाह गर्ने निर्णय गरेका छन् । दिनेश एसपी र जनगनन्दिनी रामास्वामीको विवाह मेटाभर्सको एक हिस्सा हुने भएको हो ।
यो जोडीले फेब्रुअरीको सुरुमा विवाह गर्दैछ र उनीहरूको स्वागत डिजिटल हुनेछ । दम्पतीको स्वागत हगवार्ट्स विषयवस्तुमा आधारित हुनेछ, जसमा तिनीहरूका साथीहरू र परिवार सहभागी हुनेछन् ।
टाइम्स अफ इन्डियाको रिपोर्टका अनुसार दिनेशले भने, ‘मेरो दिमागमा मेटाभर्स रिसेप्शनको आइडिया आयो र यो मेरो हुन् लागेकी श्रीमतीलाई पनि मन पर्यो ।'
दिनेश क्रिप्टो र ब्लकचेन प्रविधिसँग सम्बन्धित छन् । 'ब्लकचेन वास्तवमा मेटाभर्सको टेक्नोलोजी भएकोले, मैले मेरो विवाह तय भएपछि मेटाभर्समा रिसेप्शन गर्ने सोचेको थिएँ ।' उनले भने ।
मेटाभर्स के हो ?
मेटाभर्स एक भर्चुअल रियालिटी हो, जहाँ प्रयोगकर्ताहरूले डिजिटल अवतारमा एक अर्कालाई भेट्न सक्छन् । यो आंगमेटेड रियालिटी, ब्ल्याक चेन र भर्चुअल रियालिटी प्रविधिको संयोजन हो । समग्रमा, यो एक डिजिटल संसार हो, जहाँ तपाईं वास्तविक जीवन जस्तै बाँच्न सक्नुहुन्छ ।
दिनेशले ट्वीटरमा एउटा छोटो भिडियो पनि सेयर गरेका छन्, जसमा हुने विवाहको रिसेप्शनको झलक देखाइएको छ । दिनेश र उनका मंगेतरहरू दुबै ह्यारी पोटरका प्रशंसक हुन्, त्यसैले उनीहरूको स्वागतको विषयवस्तु ह्यारी पोटर ब्रह्माण्डबाट प्रेरित हुनेछ । यस रिसेप्शनमा सहभागी हुन अतिथिहरूलाई लगइन विवरणहरू दिइनेछ ।
तिनीहरूले मेटाभर्स रिसेप्शनमा भाग लिनको लागि आफ्नो अवतार छनौट गर्न सक्छन्, त्यसपछि तिनीहरू एकअर्कासँग घुलमिल हुन सक्षम हुनेछन् । यस भर्चुअल रिसेप्शनमा सहभागी अतिथिहरूले जोडीलाई डिजिटल उपहारहरू पनि दिन सक्नेछन् । दिनेशले भने, ‘हामी मेटाभर्सबाट उपहार पनि लिनेछौँ । अतिथिहरूले उपहार भाउचरहरू स्थानान्तरण गर्न वा डिजिटल भुक्तानीहरू गर्न सक्छन् । हामी उपहारको रूपमा क्रिप्टो पनि लिनेछौं ।
झापामा जिपिएस प्रविधि जडान गर्न आवेदन
झापा । जिपिएस प्रविधि जडानका लागि जिल्लामा एउटा मात्र एम्बुलेन्सको निवेदन परेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले जनाएको छ । जिपिएस प्रविधि जडानका लागि आवेदन दिनेमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका कन्काई शाखाको प्रदेश
आम्दानी घटेपछि दबाबमा फेसबुक, ३० प्रतिशत कम इन्जिनियर भर्ना गर्ने
काठमाडौँ । फेसबुकको स्वामित्वमा रहेको मेटा प्लेटफर्मले यो वर्ष ३० प्रतिशत कम इन्जिनियरहरू भर्ती गर्नेछ । यसका साथै कर्मचारीहरूलाई कम्पनीका प्रमुख मार्क जुकरबर्गले व्यापारको गिरावटको लागि तयार रहन आफ्ना चेतावनी
भारतमा बिना पाइलटको फाइटर एयरक्राफ्टको सफल परिक्षण उडान
काठमाडौँ । भारतको डिफेन्स रिसर्च एण्ड डेभलपमेन्ट अर्गनाइजेसन (डिआरडिओ ) ले बिना ड्राइभरको फाइटर जेटको सफलतापूर्वक उडान गरेको छ । उक्त उडान शुक्रबार कर्नाटकको चित्रदुर्गस्थित एरोनटिकल टेस्ट रेन्जबाट उडेको थियो
तनहुँका कृषकलाई प्रविधि हस्तान्तरण गर्दै स्थानीय तह
दमौली । तनहुँका स्थानीय तहले कृषकलाई कृषि उपकरण उपलब्ध गराउनका लागि सहयोग गर्न थालेका छन् । परम्परागतरूपमा खेती गर्दै आएका कृषकलाई यान्त्रिकरणमार्फत व्यावसायिक बनाउन स्थानीय तहले कृषि उपकरणमा जोड दिएका हुन्